Kụziere Ụmụ Gị Ịdị Umeala n’Obi
ISIOKWU TETA! A Mmebi Ụwa Ò Ruwela Ka Ọ̀ Bụ Na O Ruwebeghị?
ISIOKWU TETA! A Onye Ọ Bụla Chọrọ Ịmata Azịza Ya
ISIOKWU TETA! A Gịnị Ka Baịbụl Kwuru?
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Kụziere Ụmụ Gị Ịdị Umeala n’Obi
LANDS AND PEOPLES Mgbe M Gara Niu Ziland
THE BIBLE'S VIEWPOINT Aha Chineke
Isiokwu Ndị E Bipụtara na Teta! n’Afọ 2017
Nke Iri Abụọ: Na-ekwu Eziokwu
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Teta! | Nke 6 n'Afọ 2017
Nwa gị nwoke na-akpa àgwà gosiri na ọ dị mpako n’agbanyeghị na ọ ka dị naanị afọ iri.
Ọ chọrọ ka onye ọ bụla na-akwanyere ya ùgwù.
‘I nwere ike ị na-asị, oleedị ihe na-eme nwa a? M chọrọ ka obi na-adị ya mma, ma, ọ bụghị ka o chewe na ya ka ndị ọzọ mma.’
Ma, è nwere ike ịkụziri nwata ịdị umeala n’obi n’emeghị ka o chewe na o nweghị ihe ya dị mma ya?
N’oge ndị na-adịchabeghị anya, a gbara ndị nne na nna ume ka ha na-emere ụmụ ha ihe ọ bụla ha chọrọ ma na-aja ha mma mgbe niile, ọ bụrụgodị na o nweghị ihe ha mere e kwesịrị iji jaa ha mma. A gwakwara ha ka ha ghara inye ụmụ ha ntaramahụhụ ma ọ bụ dọọ ha aka ná ntị. Ha kwuru na ọ bụrụ na a na-apa ụmụaka apa otú ahụ, ọ ga-eme ka ha too bụrụ ndị obi na-adị ụtọ mgbe niile. Ma, olee ihe ụdị ọzụzụ a kpatarala? Akwụkwọ aha ya bụ Generation Me kwuru, sị: “Kama ime ka obi na-adị ụmụaka mma, ụdị ọzụzụ a emeela ka isi na-ebu ha, ha abụrụkwa ndị na-eche naanị gbasara onwe ha.”
Ọtụtụ n’ime ụmụaka ndị ahụ a na-ajakarị mma n’enweghị isi na ọdụ, na-etolite ghọọ ndị ọ na-esiri ike ịma ihe ha ga-eme ma ihe agaghị otú ha tụrụ anya ya, ma ọ bụkwanụ ma a katọọ ha. Ebe ọ bụ na a kụziiri ha ịna-achọ naanị ọdịmma nke onwe ha, ọ na-esiri ha ike ha na ndị ọzọ ịnọgide na-adị ná mma. Nke a akpatarala ọtụtụ n’ime ha nchekasị na ịda mba n’obi.
Ihe na-eme ka ụmụaka bụrụ ndị obi na-adị mma ma ha too abụghị ịna-eto ha mgbe niile, kama ọ bụ hanwa ime ihe ndị bara uru. Ịbụ onye onwe ya juru afọ naanị ezughị. Ha kwesịrị ileru anya ala mụọ ihe ha chọrọ ime ma jiri aka ha na-eme ya ruo mgbe ha mụtara ya nke ọma. (Ilu 22:29) Ha kwesịkwara ịna-achọ ọdịmma ndị ọzọ. (1 Ndị Kọrịnt 10:24) Iji melie ihe ndị a, ha kwesịrị ịdị umeala n’obi.
Jaa ha mma mgbe o kwesịrị ka a jaa ha mma. Ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị e mee nke ọma n’ule, jaa ya mma. Ọ daa n’ule, a sịla na ọ bụ onye nkụzi ya kpatara ya. Kama ime otú ahụ, nyere ya aka ka o mee nke ọma n’oge ọzọ. Jaa ya mma naanị mgbe o mere ihe dị mma. Ọ ga-eme ka ọ mụta ịdị umeala n’obi.
Dọọ nwa gị aka ná ntị mgbe o kwesịrị. Nke a apụtaghị na ị ga na-aba mba n’ihe ọ bụla nwa gị mejọrọ. (Ndị Kọlọsi 3:21) Ma, baara ya mba ma ọ kpaa àgwà ọjọọ. Ma i meghị otú ahụ́, àgwà ọjọọ ga-amara ya ahụ́.
Ọ̀ bụrụkwanụ na ị chọpụta na nwa gị nwoke na-etukarị ọnụ? Ị gba ya nkịtị nwere ike ime ka ọ dịrị mpako, meekwa ka ndị mmadụ na-eze ya eze. N’ihi ya, mee ka ọ mata na itu ọnụ abụghị ezigbo àgwà nakwa na o nwere ike ime ka a kparịwa ya. (Ilu 27:2) Meekwa ka ọ mara na onye maara ihe anaghị eji ihe ndị ọ ga-emeli na-etu ọnụ. I si otú a jiri ịhụnanya na-agbazi nwa gị, ọ ga-eme ka o jiri obi ụtọ mụta ịdị umeala n’obi.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Matiu 23:12.
Kwadebe nwa gị maka ihe isi ike ndị dị ná ndụ a. Imere nwatakịrị ihe ọ bụla ọ chọrọ nwere ike ime ka o chee na ọ bụ ihe ruuru ya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nwa gị chọrọ ka ị zụtara ya ihe ị na-agaghị azụtali, mee ka ọ mata uru ọ bara mmadụ ikowe akpa ya ebe aka ya ga-eru. Ọ bụrụ na e nwere ihe mere iji kagbuo mkpapụ unu chọrọ ime maka ntụrụndụ, i nwere ike ime ka ọ mata na ọ bụghị mgbe niile ka ihe na-agacha otú a tụrụ anya ya. Kọwakwara ya ihe ndị ị na-eme ma ihe dawa ájá ájá otú ahụ. Kama ị na-apa ụmụ gị apa, i kwesịrị ịkwadebe ha maka ihe isi ike ndị ha ga-ezute ma ha too.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 29:21.
Kụziere nwa gị ịna-emesapụ aka. Mee ka nwa gị ghọta na “a na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.” (Ọrụ Ndịozi 20:35) Olee otú ị ga-esi eme ya? Gị na nwa gị nwere ike ide aha ndị chọrọ ka e nyere ha aka gaa ahịa, buga ha ebe ha na-aga, ma ọ bụ rụziere ihe. Gị na ya soro ma ị gawa imere ha ihe ndị ahụ. Mee ka nwa gị hụ na ọ na-atọ gị ụtọ inyere ndị ọzọ aka. Ihe a bụ otú kacha mma ị ga-esi kụziere nwa gị ịdị umeala n’obi, ya bụ, ịna-eme ya eme.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Luk 6:38.
“Onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, onye ọ bụla nke na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu.”—Matiu 23:12.
“Ọ bụrụ na mmadụ na-azụtọ onye na-ejere ya ozi malite n’oge ọ bụ nwata, mgbe o mere okenye, ọ ga-aghọ onye na-enweghị ekele.”—Ilu 29:21.
“Na-enyenụ ihe.”—Luk 6:38.
NA-EWERE NA NDỊ ỌZỌ KA UNU
Baịbụl kwuru, sị: “Ghara ime ihe ọ bụla n’ihi esemokwu ma ọ bụ n’ihi ịbụ ndị onwe ha na-ebu isi, kama n’ịdị nwayọọ n’obi na-ewere na ndị ọzọ ka unu, na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”—Ndị Filipaị 2:3, 4.
Nwatakịrị ọ bụla e si otú a zụọ ga-amata na e nwere ihe ndị ọzọ ji ka ya. Ịdị umeala n’obi ga-eme ka nwa gị ghara ịmụta omume mpako juru n’ụwa taa.
Nke 6 n'Afọ 2017 | Mmebi Ụwa Ò Ruwela?
TETA! Nke 6 n'Afọ 2017 | Mmebi Ụwa Ò Ruwela?
Mozis—Nwoke Dị Umeala n’Obi